UDell Streak 7-intshi yethebhulethi ene-Android esele iveza | I-Androidsis
UAlfonso de Frutos | | Ezinye izixhobo, Amacwecwe e-Android
I-CES 2011 iqukunjelwe kwaye inyani kukuba kulo nyaka usishiyile incasa emnandi emlonyeni, kunye nencasa eluhlaza eluhlaza. Kwaye i-Android itshayele kulo nyaka kweyona teknoloji inkulu efanelekileyo kwihlabathi. Ukusuka kwi-Androidsisis sikubethe ngeendaba ezilungileyo eziye zaziswa kolu hlelo, njengethebhulethi entsha entle Motorola, okanye eyokugqibela into yokudlala ukusuka kwi-HTC. Ngoku lithuba lika UDell, othe thaca ithebhulethi yabo entsha yeDell Streak 7.
Ngelo xesha uDell wenza ithebhulethi ye-intshi ezintlanu, UDell Streak 5, kodwa khange ibe yimpumelelo kakhulu ke bazakuzama kwakhona kodwa ngeli xesha ngescreen se-intshi ezi-7. Ukucaciswa kunomdla kakhulu kuba, Ukongeza ekusebenziseni i-Android 2.2 ehlaziywayo kwi-Gingerbread, le thebhulethi ye-4G izakusebenza kunye neprosesa yeNvidia Tegra 2 kwi1Ghz. Sele sinethebhulethi leyoIya kuthatha ithuba lokuphuculwa kwemidlalo yevidiyo yezixhobo ezinala processor.
Siza Kubane Iikhamera ezimbini, ngaphambili i-1.3 Mpx Ukufowuna ividiyo kunye ne-5 megapixel ngasemva eya kukuvumela ukuba urekhode iividiyo kumgangatho we-720p. Okokugqibela gqamisa eyakho Imemori yangaphakathi ye-16GB, iyandiswa ibe ngama-32, ukufikelela kwi-Wi-Fi kunye nekhibhodi yeSwype ezenza ukuba le thebhulethi ibe yinto enomdla kakhulu ukuba ikhutshwe kwintengiso ngexabiso elinokhuphiswano kakhulu. Ngoba? Ukusilela kokubini okukhulu endikubonayo kule cwecwe: ukhuphiswano oluza kuba nalo kunye neNkqubo yalo yokuSebenza. Kodwa kuqala ividiyo yethebhulethi ukuze ubone ubungakanani bayo kunye nokusebenza kwayo okumanzi.
Siza kuthetha ngenkqubo yokusebenza kuqala. Kodwa yintoni le? Kolu hlelo lweCES abakhoyo Inyosi yobusi, la Inguqulelo yokuqala ye-Android yamacwecwe, Kwaye kunye nale ntetho, abenzi abakhulu banikezela ezona pilisi zibalaseleyo basebenza nazo Inyosi yobusi. ¿Wenza ntoni uDell ukubonisa iThebhulethi ngeFroyo? Kulungile, unganyusela kwi-Gingerbread kwaye unokufikelela ngokupheleleyo kwiNtengiso ye-Android. Kodwa, ngenxa kaThixo, le thebhulethi ine-processor-core. I-Leftover inokuqhuba kwi-HoneyComb.
Ndiyathemba ukuba inyuselwa kwi-HoneyComb, hayi kwi-Android 2.3 ngoku basithembisile kuDell, kwaye banikezela le thebhulethi ngexabiso elinokhuphiswano kuba, ngesixa sonikezelo amacwecwe kuyakubakho, kwaye kuya kubakho izisulu zokwenyani ezifana enye, Ndiyoyika uDell anganika ibump elungileyo kunye nethebhulethi yakhe.
Imvelaphi | I-Eurodroid
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » UDell Streak 7-intshi yeethebhulethi ene-Android esele ibonisiwe
Ndiqinisekisa ukuba ingahlaziywa ibe yi-3.2 ye-HoneyComb, isebenza kakuhle ngaphandle kweengxaki
Ndinayo ezandleni zam .. intle kwaye ingahlaziywa ibe yi-3.2 ye-HoneyComb, isebenza ngaphandle kwengxaki kwaye iyakhawuleza, imizobo nangona isisombululo sescreen silungile….
UAndress Cabrera sitsho
Phendula u-Andress Cabrera
isebenza kakuhle nangona ngamanye amaxesha kufuneka uyiqale kwakhona ngeqhosha lokusetha kwakhona langaphakathi. Ibhetri imfutshane, ukutshaja kuyakhawuleza, isisombululo somzobo siyamkeleka. Enye yeengxaki kukuba ayinasidibanisi se-HDMI. Ukuphucula i-ANDROID 3.2 ngaphandle kweengxaki kwaye isebenza ngokugudileyo.
Ndichithe i-euro ezingama-199 kwiNdlu yeeFowuni, ikhutshwe ngokupheleleyo kunye nenketho ye-3G-WIFI.
Okwangoku amava omsebenzisi ayamangalisa.
Molweni nonke, nceda, ukuba umntu angandixelela ukuba ndisusa njani isiciko seSIM khadi, (iiselfowuni), iigrs eziliwaka
Kulunge kakhulu kodwa ndinamathandabuzo ukuba iyasebenza njengoko iseli xq inegalelo le-sim
Ndithengisa eyam ikwimeko egqwesileyo kwaye ndinetyala elikhethekileyo kuyo kwi-400.000 yeepeso ezinomdla fowunela i-3207656854
UWalter Roldan sitsho
Eyam inengxaki yokuba ikhamera ibonisa impazamo kwaye andinakho ukuyisebenzisa
Phendula uwalter roldan